Làzaro malato di tumore guarisce grazie a Padre Pio | Ilblogdellapreghiera
Onye na-arịa ọrịa kansa Lazaro gwọọ Padre Pio
Paolo Tescione	Edere ya June 14, 2020 June 14, 2020
A ga-agwọ nwatakịrị ekele Padre Pio. Ihe akaebe ahụ bịara na profaịlụ raara nye Padre Pio na Instagram. Iji kọọ ihe merenụ bụ nne onye Brazil, Greicy Schmitt. Nke ikpeazu, nne Làzaro na-ekwu na nwa ya agbakeela n'ọrịa kansa, n'ihi arịrịọ Padre Pio.
Lazaro gwọọ ọrịa kansa, akaebe nke ezi na ụlọ
Dabere na nne Làzaro kwuru, na Ọktoba 2016 ndụ ha gbanwere mgbe otu onye otu Odọd nke O Caminho dị nsọ gara ịchọ ha na njedebe nke Mass na parish ha. Na emume ahụ otu a ka ọ rịọrọ maka aha nwantakịrị Lazarọs, wee sị ka ekpee ya ekpere.
Mana ọ kwụsịghị ebe a, ebe ọ bụ na n'otu oge ahụ ka ọ kpọbatara ya Padre Pio. Ezinụlọ nke obere Làzaro amaghị Padre Pio ya mere ha malitere ịmara ndụ ya na akụkọ ihe mere eme ya. Na 2017, a chọpụtara na nwa ahụ nwere ọrịa ọjọọ, retinoblastoma, ọrịa kansa na-ahụ anya.
Ma, okwukwe sirila nyere ezinụlọ aka ike. Nwa nwoke a ghaara ya ime onwa itoolu. "Na ngwụsị nke usoro ọgwụgwọ ikpeazụ m kwere nkwa m Padre Pio, na-arịọ maka nchekwa ebighi ebi ya nke Lázaro, yabụ na a ga - enwerịrị onyunyo mara mma ya na ụmụnna nwoke (iberibe O Caminho)," nne a kwuru.
Nkwa ahụ dị na Jenụwarị 2017 wee debe kpọmkwem na Septemba 23, 2017, bụ ụbọchị oriri Padre Pio.
N'ikpeazụ, otu afọ mgbe nkwa ahụ gasịrị, e debere nke a na obere Làzaro n'ihi arịrịọ nke Padre Pio na Madonna meriri ajọ ọrịa a ma gwọọ ya. Ruo ugbu a, nwata ahụ na ezinụlọ ya bi na Corbèlia, na steeti Brazil nke Paranà ma bụrụ nwata nwoke na-eme ebe ịchụàjà na parish.
Ọtụtụ enweela mmasị na akụkọ banyere Làzaro na ezinụlọ ya na n'ezie na-agbaso ihe omume niile ha na Instagram site na profaịlụ @irmaoscavaleiros.
Unu niile nwere ike ime otu ihe a, ma oburu n’acho ima ma soro ihe mere nke obere Làzaro onye mechara buru otutu ahụhụ laghachila ibi ndu na - enweghị nlekọta dika nwatakiri kwesiri ime.
Isi mmalite cettinella.com
← Na post gara aga Gara aga post:Medjugorje: June 14, 2020, Nwanyị anyị nyere ozi a na Oriri Nsọ
Ọzọ Post → Post ozo:Na-atụgharị uche taa na mmekọrịta niile siri ike maka gị